Soosaarka Teendhada Teendhada Xayeysiinta Midabkeedu Toban yahay 10 Best 10 Oo Wanaagsan | | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Xalka Muuqaalka Xirfadlaha T Taambuugga Tayada
CFM waxay u heellan tahay inay bixiso teendhooyinka ugu dambeeya ee xirfadle iyo tayo sare leh xulashooyinka qaabeynta. Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican si aan u hubinno in macaamiisha ay u helaan teendhada soo-bandhigidda ee ugu habboon dhacdooyinkooda gudaha iyo dibadda.
Xulo teendhada 10x10, oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan, shirkaduhu waxay helayaan qalab xayeysiin ah oo loogu talagalay fududeynta isticmaalka iyo natiijooyinka waaweyn. Waxaa badanaa loo adeegsadaa dhiirrigelinta wax soo saarka sida bandhig ganacsi ama bandhig. Hase yeeshe, waa wax badan, laakiin si fiican ayuu ugu shaqeeyaa xaalad kasta.
Teendhooyinka Xayeysiinta ee Waara, Mudada Dheer iyo Soojiidashada leh
Nidaamkayaga xayeysiinta caadiga ah waa aalad suuqgeyn xoog leh. Markaad isticmaasho teendhooyinkeenna caadiga ah, waxaad helaysaa awood aad ku dejiso oo aad u dhigto halka aad rabto. Dharka gaarka ah ee aan isticmaalno ayaa ah kuwa ololku aad u sareeyo, waxay bixiyaan ilaalinta UV, waana kuwo aan biyuhu xirin. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalka gudaha iyo dibedda ee kiraystayaasha.
Midab Baahsan oo Dheeh-Sublimated ah, Midab leh oo Fiican
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee 10 * 10 ka soo baxa teendhada daaqada ayaa ah astaamaha xayeysiinta ee aadka u wanaagsan. Marka ay timaado teendhooyinka xayeysiinta, kuwani way muuqdaan. Teendhooyinka xayeysiinta ah ee aan bixinno ayaa u oggolaanaya astaan ​​ama daabacaadda halhays. Teendhooyinkani waxay si fiican ugu shaqeeyaan badiyaa sublimation dheeha, taas oo hubinaysa sawirro daabacan oo cad.
Fursado Kala Duwan Oo Aad Ku Daboolikarto Baahidaada
Teendhadan suuqgeynta dhacdadan 10x10ft, waxaan ku siineynaa saddex nooc oo waabab teendhooyin ah, aluminium laba jibbaaran 31mm tube, aluminium hex 40mm iyo alxum 50x tubbo aluminium ah. 31mm jir teendho laba jibbaaran iyo 40mm hex taambuug dhisme ayaa ka miisaaniyad badan, iyo 50mm hex xayndaabkiisu waa hawl culus oo muddo dheer loo isticmaalayo.
Ka sokow jihooyinka waajibaadka culus, waxaan sidoo kale bixinnaa qalab taxane ah, sida jawaan ciid, xarig iyo koror dhulka, si ay kaaga caawiso inaad kor u qaaddo xasilloonida qolka bandhigga ee cimilada dabaysha qaarkood.
Teendhada Flag Mount Holder
Xadhig & Dhulka Spike
Adeegga Daabacaadda Tartanka oo aan lala tartamin
CFM waxay bixisaa teendhada daaqada daabacan ee daabacan iyo waliba kuwa xajmi ahaan le'eg. Waxaan soo ururinay ku dhowaad dhammaan noocyada muuqaalka taambuugga muuqaalka ee 10x10ft, 10x15ft iyo 10x20ft. Na sii cabirka meegaarkaaga waxaanan kaa caawin karnaa inaan qaabeyno dusha sare ee teendhada si ay ula mid noqoto.
S: Midabka hemsku ma la jaan qaadi karaa midabka teendhada?
J: Haa, waxaan dooran doonnaa hems isku midab ah oo ku saleysan midabka dhulka teendhada.
S ： Miyaad ku samayn kartaa daarta ama derbiga buuxa hal xabbo?
J: Waxaa saamayn ku yeelan doona tirada kooban ee dharka, waxaan ka dhigi doonnaa laba qaybood oo isku wada dhejinaya si xirfadaysan oo aan muuqan lahayn si loo hubiyo astaamo isku dhafan oo qumman.
S: Sidee loo ilaaliyaa xasiloonida teendhada marka la adeegsanayo bannaanka?
J: Saddex siyaabood oo lagu kordhiyo xasilloonida ayaa loo heli karaa xulashadaada.
l Baakad dabayl leh jawaan ciid ah
l suumanka hagaajin karo iyadoo webbing
l Velcros leh jawaan ciid ah
S: Sidee looga fogaan karaa qulqulka biyaha ee bannaanka?
J: Waxaan u isticmaali doonnaa cajalado hawo kulul dhammaan khadadka tolliim si looga fogaado daadashada.
S: Sidee loo nadiifiyaa teendhada?
J: Markaad tixgelinayso dahaadhka dharka, ma fiicnaan lahayd inaad isticmaashid nadiifiye. Ku tirtirka meelaha wasakhda leh saabuun jilicsan ayaa ah xulasho wanaagsan.
S: Ma u habeyn kartaa daabacaadda si ay ula mid noqoto qalabkeyga?
J: Haa, iyadoo aan loo eegayn meesha aad ka hesho qalabka wax lagu soo bandhigo iyo nooc kasta oo qalabka aad ku soo bandhigto, waxaan daabacan karnaa shaxanka saxda ah ee u dhigma.
S: Sidee u xirxiraysaa teendhada garaafka iyo qalabka?
J: Guud ahaan, waxaan si gooni gooni ah u baakadeyn doonnaa teendhada garaafka, qalabka, iyo baakadka giraangirta si looga fogaado waxyeellada taayirrada gaadiidka.
Teendhada Xerada 10x15